Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Zava-misy mahavariana sy mahafinaritra momba an'i Karaiba
Karaiba dia toerana tropikaly fantatra amin'ny tora-pasika fotsy, andro lava, alina mangatsiatsiaka, ary toerana fizahan-tany. Na izany aza, betsaka kokoa ny faritra noho ireo zavatra ireo. Na mikasa fialan-tsasatra any ianao na te hianatra bebe kokoa momba ireo toerana samihafa manerana izao tontolo izao, ireto misy zava-misy mahaliana momba an'i Karaiba izay mety tsy ho fantatrao.
Toeram-pivezivezena malaza izy io
Na dia afaka mandeha na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao amin'ny sambo fitetezam-paritra ianao, dia ho sahirana ianao hahita zotra fitsangatsanganana izay tsy manana fonosana iray mankany Karaiba, miaraka amin'ny malaza indrindra. dia fitetezam-paritra atsinanan'i Karaiba. Na dia ireo zotra mifantoka amin'ny toerana hafa aza dia mety ahitana seranan-tsambo vitsivitsy any Karaiba.
Lehibe kokoa noho ny eritreretinao
Na dia manana fananana sy faritany any Karaiba aza i Etazonia, dia matetika no heverin'ny olona ho zavatra misaraka sy vahiny any Etazonia izany. Na izany aza, i Florida dia azo raisina ho anisan'ny Karaiba, midika izany fa ny sambo rehetra miainga amin'ny seranana Florida dia ara-teknika dia sambo Karaiba na aiza na aiza alehany. Ny heverin'ny olona matetika hoe Karaiba dia misy nosy 7,000 mahery (tsy misy mponina) ary 9% amin'ny haran-dranomasina rehetra eran-tany. Ny Mesoamerican Barrier Reef dia faharoa amin'ny Great Barrier Reef any Pasifika amin'ny habeny. Indrisy anefa fa mihena ny haran-dranomasina maneran-tany.
Misy Kolontsaina Vazimba Maromaro
Ny Arawak sy ny Tainos dia vondrona vazimba teratany roa avy any amin'ny Nosy Karaiba. Ireo no roa tamin’ireo vondrona nihaona tamin’i Christopher Columbus tamin’ny diany tamin’ny taonjato faha-15 mba hitady lalana fohy kokoa ho any Inde avy any Eoropa. Nihasarotra ny fiainan’ny Vazimba taorian’ny fanjanahantany. Samy tsy tafavoaka velona na ny vahoaka na ny kolontsainy. Na izany aza, mbola manan-danja amin'ny fomban-drazana ao amin'ireo nosy izy ireo hatramin'izao.
Samy hafa ny vanim-potoana
Any amin'ny faritra ambony kokoa, ny taona dia mizara ho vanim-potoana efatra miavaka. Any Karaiba, izay zara raha midina ambanin'ny 80 degre ny maripana, dia misy fizaran-taona roa ihany, tsy manavaka ny mari-pana fa ny rotsak'orana. mando kokoa ny fahavaratra raha maina ny ririnina. Izany no mahatonga azy io ho tsara ho an'ny mpizaha tany mitady fialan-tsasatra amin'ny hatsiaka sy ny lanezy.
Misy Volkano mavitrika
Tsy ny nosy Karaiba rehetra no volkano. Na izany aza, ao anatin'ireo dia misy 19 izay mety hipoaka indray amin'ny fotoana iray, na ho ela na ho haingana, hahatonga azy ireo ho velona. Tsy midika akory izany fa mipoaka foana izy ireo, ary tsy azo atao ny maminavina hoe rahoviana marina ny fipoahana. Ny sasany amin'ireo foibe volkano velona any Karaiba dia ahitana ny nosy St. Kitts sy Nevis, Dominika, St. Lucia, Grenada, St. Vincent, ary Martinika. Ny nosy hafa tsy misy volkano eo amin'ny manodidina dia tandindomin-doza amin'ny tsunami, lavenona ary lozam-pifamoivoizana hafa.
Nalain'ny Kisoa Mahery Iray amin'ireo Nosy ireo
Exuma dia nosy tsy misy mponina ao amin'ny Bahamas. Tsy misy mponina, izany hoe, fa fonenan'ny mponina kisoa. Ireo kisoa ireo dia nentin'ny mpanjanaka Eoropeana tany Karaiba, saingy tsy fantatra mazava hoe ahoana no niafarany tao amin'ilay nosy. Ny mazava dia tia mandany ny androny amoron-dranomasina izy ireo, milomano ao anaty rano mba hampangatsiaka. Misy fitsangatsanganana izay mitondra mpitsidika any amin'ireo nosy mba hijery akaiky ny kisoa. Mety ho afaka ny hiaraka amin'izy ireo mihitsy aza ianao raha mbola mitazona halavirana feno fanajana.
Toerana nahaterahan’i Rôma io
Araka ny tantara, ny Karaiba dia mpamokatra fary lehibe, izay nodiovina mba hanaovana rôma. Ny toe-karenan'ny alikaola dia foto-tsakafo ara-toekarena ao amin'ny faritra hatramin'izay, ary ny nosy voalohany fantatra fa namokatra azy ara-barotra dia Jamaika.
Karaiba dia faritra tranainy sy isan-karazany miaraka amin'ny lasa sarotra nefa mahaliana. Be dia be ny atolotra ho an'ireo izay misafidy ny hitsidika, ary na dia ireo izay tsy afaka mandray soa avy amin'ny fianarana bebe kokoa momba izany.
November 6, 2021 amin'ny 14: 38
Ny Exuma dia rojo nosy 365 antsoina hoe cays izay TSY misy mponina, raha ny marina dia misy olona eo anelanelan'ny 7000 ka hatramin'ny 8000 no mipetraka indrindra ao amin'ny nosy lehibe, Great Exuma, ary any amin'ireo nosy hafa amin'ny rojo….
Napetraka tany amin'ny nosy foana ny kisoa talohan'ny taona 2000 NYE rehefa nino ny olona rehetra fa hifarana izao tontolo izao ary manangona sakafo amin'izany fomba izany. Nifandona tamin'io helodrano io ny tantsambo ary nanomboka naka sary an'ireo kisoa ireo ary niely teo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ny teny ka nanjary nahasarika azy ireo…..